1 BTC သို့ USD ᐈ စျေးနှုန်း 1 Bitcoin တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ
1 BTC သို့ USD
သငျသညျပြောင်းလဲပါပြီ 1 ₿ Bitcoin သို့ 🇺🇸 အမေရိကန် ဒေါ်လာ. သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှုရလဒ်ပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုပါ. ငွေကြေးပြောင်း 1 BTC သို့ USD. ဘယ်လောက်လဲ 1 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ? — $48379.294 USD.ယင်းကိုကြည့်ပါ ပြောင်းပြန်သင်တန်း USD သို့ BTC.ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် BTC USD သမိုင်းဆိုင်ရာဇယား, နှင့် BTC USD သမိုင်းဆိုင်ရာမှာ data ငွေလဲနှုန်းကို၏. ကြိုးစားကြဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပိုပြီးပြောင်း...
စျေးနှုန်း 1 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ
မှုနှုန်းခြင်းအားဖြင့်: $48379.294 USD (23.394)0.0484%
ပြောင်းပြန်: 0.000020 BTC
မင်းသိလား? တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ထိုနေ့၌, ငွေကြေးနှုန်းကို Bitcoin ရန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ခဲ့: $9157.509. ထိုအချိန်မှစ. ငွေလဲနှုန်းရှိပါတယ် တိုး 39221.78 USD (428.30%).
0.0025 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.005 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.0075 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.01 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.0125 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.015 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.0175 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.02 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.0225 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.025 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ298 ကနေဒါ ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ25 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Bitcoin298 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာ7500 ကနေဒါ ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ20 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာ129.99 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ29 ဘရာဇီး ရီးယဲ သို့ ယူရို500 ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ သို့ ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ်120000 EagleCoin သို့ ယူရို120 EagleCoin သို့ ယူရို49 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ20 ကာတာရီအော်လ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ0.1 Monero သို့ ထိုင်းဘတ်1 Multibot သို့ ရုရှ ရူဘယ်
1 Bitcoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 Bitcoin သို့ ယူရို1 Bitcoin သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်1 Bitcoin သို့ ဆွစ် ဖရန့်1 Bitcoin သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ1 Bitcoin သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ1 Bitcoin သို့ ချက်ခိုရိုနာ1 Bitcoin သို့ ပိုလန်ဇလော့တီ1 Bitcoin သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာ1 Bitcoin သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ1 Bitcoin သို့ မက္ကဆီကို ပီဆို1 Bitcoin သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ1 Bitcoin သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲ1 Bitcoin သို့ အိန္ဒိယ ရူပီး1 Bitcoin သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီး1 Bitcoin သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ1 Bitcoin သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ1 Bitcoin သို့ ထိုင်းဘတ်1 Bitcoin သို့ တရုတ် ယွမ်1 Bitcoin သို့ ဂျပန်ယန်း1 Bitcoin သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်1 Bitcoin သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ1 Bitcoin သို့ ရုရှ ရူဘယ်1 Bitcoin သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညား
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 06 Mar 2021 18:05:01 +0000.